माधव कुमार नेपालले बाँडेको भाइरस रिमुभिङ कार्ड घातक : स्वास्थ्य मन्त्रालय - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
शनिवार, असार १३ २०७७
उक्त कार्ड लगाएपछि कोरोना भाइरस संक्रमण नहुने दावी पनि गरिएको छ । तर उक्त कार्डबारे भ्रम फैल्याइएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कडा आपत्ति जनाएको छ । नेपालमा विक्रि वितरण गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले त्यस्ता कार्डले मुटु, फोक्सा लगायतमा अंगमा गम्भीर असर पार्नसक्ने चेतावनी पनि दिए । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने गौतमले बताएका छन् ।
. ग्रहण लागेको सूर्यले धाक नलगाउन एमालेलाई माधवकुमार नेपालको चेतावनी
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बुधवार, असार १७ २०७७ १९:३०:२२